Maaskarada sixirka ee Harry Potter ee farshaxanyahankan reer Mareykan ah | Abuurista khadka tooska ah
Waa hagaag, maaha inay isku beddelayso Harry Potter Sida ay tahay, laakiin ushaas, sida ka muuqata fiidiyowga, maaskaro wuxuu ka socdaa madow ilaa khariidada Marauder. Wuxuu ku iibiyaa dukaankiisa internetka oo uu diyaar garoobaa maxaa yeelay gabi ahaanba waa sixir.
Stephanie Hook waa farshaxanka ka dambeeya wajiyadan rabaani ah in ay awood u leeyihiin in ay u beddelaan sida aan wax ka ogaan karno fiidiyowga sida uu muujinayo. Baro sixirka ka dambeeya waji galkaas oo ku saleysan adduunka Hogwarts.
Hook wuxuu awood u yeeshay inuu abuuro maaskaro sixir ah oo ah awood u leh inuu ka gudbo madow si ay Marauder map of ah harry potter world. Waxyaabaha qosolka leh ayaa ah in hadda boggaaga aan laga heli karin Etsy; laga yaabee inay wax ku leedahay xuquuqda lahaanshaha.
In a video lagu dhajiyay TikTok. Fiidiyowga ugu horreeya ee Hook wuxuu kasbaday in ka badan 400.000 oo jecel wuxuuna u horseeday inay maaskan ku iibiso bakhaarkeeda internetka.
Waqtigan xaadirka ah, marka laga reebo bogga sheyga ee dukaankaaga internetka oo leh Shopify, sidoo kale waa la waayey, sidaa darteed waxay qaadan doontaa xoogaa dulqaad si loo helo mid.
Hook wuxuu sharxayaa inay tahay maaskaro uu 17 saacadood ku qaato mid ka mid ah in la sameeyo sababo la xiriira midabbo ay dhaqaajiso kuleylka oo markaa siiso taabashadaas sixirka ah. Waxaas oo dhan waxaa uguxun, waji-yeelkan sixirka ah ee ku saleysan adduunyada Harry Potter wuu xadidnaan doonaa, ee la soco dukaankaaga inaad isku daydo inaad mid hesho.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Maaskaro xariifnimo iyo sixir leh oo isu beddelay Harry Potter
Waa kuwan waxa ku cusub barnaamijyada fiidiyowga ee loo yaqaan 'Cloud Cloud' oo la cusbooneysiiyey